Cadyahow ama kucunay ama ku ciideeyey!!!
Bismillaahi wassalaatu wassalaammu calaa rasuulilaah
Mahubo murtidan meeshay kubaxday, sida ay ubaxday iyo ciddii bixisay intaba, waxaanse qofna shaki ooga jirin macnaha ay xanbaarsantahay kaas oo kadhigan qof awood buuxdo uleh inuu siduu rabo kayeelo cad hilib ah oo gacanta oogu jiro. Cadkii ayuu u goodinayaa leeyahayna amma waan iska kaa cantuugi oon ku calalin amma ciiddan hoostayda ah baan kugu camcamin, maxaa yeelay waxaa cadka lagasoo jaray asalkiisii oo meella kuma dhaggana oo hadduu tusaale ahaan cadka hilibka ah uu ku oolli lahaa xitaa orgi yar oo nool oo daaqsanhayo qofku sidaa uguma goodiyeen oo waxaa kahorrayso intuusan cadoowba dhihin; lahaanshaha orgiga, soo qabashadiisa, mindi uhelid, qaliddiisa, harag kabixintiisa, jarjaridda hilibkiisa oo markaa cadkii lagasoo jaro iyo waliba karintiisa, soliddiisa ama huurintiisa wa hadduusan qofka sida Xabashida hilibka caydhiinka kucuninee (arrintaa danbe waan un maqlay ee mahubo inay jirto iyo inkale).
Ninka Tigreega horjoogaha u ah ee Itoobiyana xoogga kuhaysto kadib markuu soo muquuniyey qowmiyado badan oon daris nahay sida Oromada iyo Caffarta iyo kuwo aannan daris ahanyba sida Axmaarada oo kale ayuu isyidhi dhulalkii Soomaalida een hore gacan kuugu jirin sidoo kale yeel oo muquuni. Muddo dheer oy Mukhaabaraadkiisa ka abuurayeen saldhigyo ay warbixinnada kusoo uruursadaan, sidoo kelana hawlo kharibaad ah iyo burburin Soomaaliya uga fuliyaan, waxay markii danbe isugusoo biyoshubatay in Jammahuuriyaddii Soomaaliya ay noqotay cad hiliba, odaygana markaa qiimayn kadib wuxuu jeclaystay inuu cadka cantuugo oo sidaa calaliyo, maadaama aynan munaasb ahayn in cadkaa hilibka ah oo dadaal dheer loosoo maray diyaarintiisa lana hubo barootiinnada kujirto farabadnindooda iyo baahida loo qababa inayna munaasab ahayn in latuuro oo ladayaco fursaddaa qaaliga ah.
Waxaa layidhaahdaa mukhaabaraadka macluumaadka ay keenaan waa guusha badhkeed (waa markii dagaal laga hadlayo), maxaa yeelay intaadan dagaal qaadin ayey kuusoo diyaarin ciidanka cadowga warbixintiisa oo dhan, tusaale ahaan; Tirada ciidanka cadowga, tayada, tirada iyo noocyada hubkiisa, niyadda dagaal ee ciidankaas, meelaha ay kajilicsan yihiin, meelaha ay kadhisan yihiin, qaabka ay u urursan yihiin, difaacooda, hoggaankooda iwm. Haddaad warbixintaas oo sax hesho dagaal hortii waxaa kuu hadhay oo qudha 50% fulinta dagaalka ood kuguulaysato. Haddayse dhacdo in warbixinnadaa muhiimka u ah dagaalka aad galayso ay khalad ahaayeen waxay ubadantahay in lagaa guulasyto, afkana ciidda luguu daro.
Waxaa tusaale kuugu filan wixii Mr Bush kaqabsaday Ciraaq, laga billaabo sababtii ay sheegteen inay Ciraaq uweerarayaan, (illeen dagaaloow iska dagaal ma aha oo waa inay jirto sabab xaq kuu siinayso inaad daggaalanto), lugu geeyo qabsashada Ciraaq laqabanayo waxay kusalaysnayd been marka laga reebo warbixinta ay kahaysteen dhismaha, tirada iyo tayada ciidankii Saddaam. Waxaa lagasoo wariyey mukhaabaraad dalal kale oo Reer Galbeed ah in warbixinta kudhalisay Mr Bush inuu weeraro Ciraaq ay katimid Mukhaabaraadka Iiraan oo dhaxgal qotodheer kusammeeyey ururkii uu Madaxda u ahaa Axmed Jalabi ee INC (Iraqi National Congress).
Ururka INC wuxuu ahaa urur ay Ameerika aad utaageri jirtay kuna tiirsanayd rabtayna inay u adeegsato saammaynta Ciraaq iyo milkinta mustaqbalkeedaba. Sidaa awgeed wixii macluumaad ah oo Ciraaq looga baahdo ururka ayaa lagasoo warin jiray maadaama uu lahaa xafiisyo horumarsan oo lasocday xogta Ciraaq (waa siduu ururku sheegan jirey). Markuu Mr Bush waagu kubaryey beenaale kutubkaatubloow ahna noqday ayaa la’iskudayey in bal hoos loogu dhaadhaco halka ay sartu kaqudhuntay. Waxaa iyana lasoo wariyey in saraakiil badan oo ururka INC siiba kuwii mukhaabaraadka uqaabilsanaa lawaayey meel ay aadeen qabsashadii Ciraaq kadib. Muddo kooban kadibna lagaba warhelay ayagoo iska tamashlaynayo magaalooyin kuyaallo Iiraan oy muuqatana inay iskuhallayn halkaa ujoogaan. Waxaan umalayn inay dadka qaar xusuustaan muddo kooban kadib qabsashadii Ciraaq in lugu dhagganaa Axmed Jalabi oo mar laxidhay ama la qishqishaaday asaga iyo sarakiil lashaqyn jirtay, in lala wareegay xafiisyadiisii iyo wixii uu gacanta kuhayey, muddo kadibna la’iska dhaafay, maxaa yeelaybaa layidhi waxaa caddaatay inuusan wax dhiba oo ulakac ah uusan Maraykan ugaysan oo laftiisaba lakhayaanay oo laga fuud cabbay.
Baladoo dhanbaa layidhi Iiraanbaa kadanbaysay, waxayna Iiraan sidaa kunoqotay dalkii ugu horreeyey adduunka ee asagoon xabbad qush kasiin katakhalusay cadowgiisii ugu waynaa ee ugu halista badnaa jiritaankiisa. Iiraan waxaa dhuunta ugashay Ciraaq oo uu Saddaam oo madaxa looga jiro xukumo, sidoo kalena ay Reer Galbeedka iyo Ruushkaba kuhubeeyeen. Arrintaa ay Iiraan katakhalustay maamulkii Saddaam waxay sababtay inay awoodda millatari iyo ta siyaasadeed ee iiraan ee Bariga Dhexe ay saddex jibbaaranto wakhti yar gudihii, meesha tii Ameerika ee bariga dhexe ay wiiqantay. Qisada qaybteed hore wa la qaraiyey oo wax badan lagama sheegin laakiin tan danbe ee korodhka awoodda Iiraan iyo wiiqanka ay wiiqantay awoodda Ameerika ee Bariga Dhexe waa arrin jirto ayna baadhis kadib bannaanka soo dhigeen Urur Maraykan ah oo loo yaqaanno Council on Foreign Affairs (CFR). Qiyaas adiga dagaal aad gashay ood silic iyo saxriir umartay oo guul aad kagaadho iskadhaafee cadowgaadi koowaad kuliibaanay kuna dhargay. Waxaa horey loo yidhi guul waxaa ugu macaan midda cadowgu kusiiyo asagoon u kaysayn, maxaa yeelay cadow guul looma quudha wuxuu gacmihiisa kukeensado mooyee.
Haddaan dib ugusoo noqdo odaygaii Tigreega horjooga u ahaa, macluumaadkii uu dhowr iyo tobanka sano ka ururinayey Soomaaliya, wax alla waxuu daraasad sammayn hayey illeen diiradda wuxuu un uga jeeday waxay ahayd dagaal oogayaal iwm, meeshaba muusan soo dhigan inay soomaali kujiraan dad mabaad’ii leh, dad diin leh, dad dammiir leh oon aqoon wax gobonimo iyo geeri u dhaxeeyo. Dad aan musuqmaasuq soo marin oon la iibsan karin, dad aan loo cagajugalyn karin, dad aan lasiri karin innaba hayaraatee. Markuu cadkii hilibka soo diyaarsaday oo ruug oo liq yidhi ayuu kumargaday oo uu dhuunta u istaagay oy lafdheer oo hilibka kuqarsoonayd iskudadabtay dhuuntii.
Hadday odayga neeftu kudhagtay oo ay lataliyaashiisii kusoo yaaceen, Baadhis kooban kadib waxaa lugu yidhi iskasoo tuf cadkan baas haddii kale naftaa kaa haadi. Waxaa loo usheegay inay hilibka kudhaxjirtay laf labada dhinac kaqorqoran oo leh laba caaradood oo mindi oo kale ah, waxaana loogu daray waxaa lafta kuxardhan erayo u eg Ashabaab. Ashabaab aa! Oo ma idinkaa iisheegay inay kujiri karto laf caynkaa ah hilibka. Yaa ogaa waa su’aalee? Xitaa Soomaalidii uhaysatay inay Soomaaliya xaaladdeeda xog ogaal uyihiin ayaa layaabay ururkan awoodda badan, sida fiicanna udhisan qaab millatari iyo mid siyaasadeed ee aadka u dishibiliinka badan. Waxaan shaki badan iiga jirin inay saraakiil badan oo mukhaabaraadkiisa kamid ah kuwaayeen shaqadooda iyo darajoba fashilka odayga lasiiyey macluumaadka faalsada ah loogana digi waayey mashaqada naftiisa galaafan gaadhay walina korsaaran.
Cabaadkii uu maalintaa billaabay ayuu kujoogaa, Soomaaliya waan kabaxaynaa ayaa laga wariyey usbuucyo kadib markuu soo galay, waxayse kuqaadatay laba sano inuu kadhabeeyo, maxaa yelay wuu margaday oo biyo uu isaga dajiyo lafta u dhaxgashay cadka hilibka ah ayuu baadi goobayey. Markay suurtogali wayday ayuu iska tufay oo uu yidhi cadyahow haddaan kucuni waayey ciidda ayaa kutaqaanno. Caqligayga yar wuxuu iisheegay inuu Odayga Tigreega ah haystay macluumaad saxa oo kusaabsan awoodda iyo tayada ururkii burburray Maxkamadaha Midoobay, sida raggii madaxda u ahaa waxay ahaayeen iwm, waaba haddyna qaar xidhiidh hoose lalahayne, bal uusan haysan macluumaad kufilan qaybta Shabaabka oon ayagu markaa warbadanba laga hayn, ahaana urur kudhax jiray Maxkamadaha Midoobay balse dhisnaa oo ay wax walba uhabaysnaayeen. Marka markuu isyidhi cadka cun oo uu kumargaday ayey usoo baxday in cadku uusan ahayn suu mooday, oo ay dhaxjiifto laf dheer oo adag oo Shabaab layidhaahdo aflabadii ayuuna dhawaqay.
Waxaan filayaa inay dad badan oo Soomaali ah xusuustaan waagii ay Kooxda Imbageetti dagganayd Baydhabo, MMI na ay katalinayeen koonfurta inteeda kale waxaa jirey ciidamo Itoobiyaan ah oo joogay Baydhabo had iyo goorna ciidamo hor leh yey soo galin jireen Baydhabo, saasooy tahay horjoogaha Tigreega iyadoo caalamka oo dhan ujeedo ciidankooda wuu inkiri jirey inay ciidan kajoogaan soomaaliya. Wakhtigaa lagasoo billaabo illaa hadda oy ciidamadiisa say rabaan ugana baxaan uganasoo galaan Xadbeenaadka aan laxarriiqin wuu inkiraa, waxaana ugu danbaysay maalmo kahor inay ciidamadiisa kasoo gudbeen iyadoo saraakiisha ugu sarrayso maamulka Tigreegana ay inkireen arrintaa. Waxaa muhiim ah in la’isla garto maanta inuusan jirin xadkaas beenta ah oo labada dhinac waa soomaali iyo Qolada Tigrega ee Itoobiya xoogga kuhaysatee la’isku waafaqsan yahay inuu xadku been yahay. Annaga kasoomaali ahaan horta xuduud lama wadaagno Itoobiya ama Tigree, waxaan xad lawadaagnaa dad aan isku jinsi iyo iskudiin nahay oo Oromo iyo Caffar loo yaqaanno oo xoog lagu haysto Itoobiyaanna aan ahayn.
Horjoogayaasha Tigreega laftoodu marhore ayey meel iskadhigeen xadkan lugu muransanyahay muddada dheer, maxaa yeelay waxay istuseen in dhulka xadbeenaadka xagga shishe ka ah uu yahay dhul dihan oo dayacan xeebo dhaadheer leh yahayna waxay ubaahan yihiin, marka haddii Eriteriya neefta kuxidhay mintidna kunoqotay oon rajo laga qabin in loo xoog sheegto. Xadbeenaadkii marka way kasaareen meesha waxayn u arkaan dadka xadbeenaadka labada dhinac kadaggan ee Soomaalida ah inay yihiin dad riqiisa, juhalo ah, anarkist ah oon nidaam iyo hawl ay kuhormaraan aan awoodin inay sammaystaan marka waxay iska dhaadhiciyeen intaan lakaashanno dalalka aan saaxiibbada nahay aan suuqyada madoow ee Maafiyada kasoo gadanno kolba kii sheegta inuu siyaasi uyahay illeen wuxu waa un beece oo kama duwano hilib caydhiin ah oo suuqa yaallee.
Qofkii aan kuqancin aragtidaa aan soo gudbiyey hafiiriyo siday udhaqmayeen Tigreegu illaa maalintay dhaleen Imbageetti 2004 tii illaa maantadan aan joogno. Hal maalin umayna dhaqmin sidii dal caawinayo dawlad madaxbannaan, cidna dabada kamay dadan jirin oo say doonaan ayey dhaqmi jireen. Qofkay rabaan bay dilaan, kay rabaanna way daayaan, xitaa ciidamadii dawlad kusheegga ayey iska gummaadi jireen markay xanaaqaan ama khamri kadhargaan cid kahadli kartayna majirin. Nimankii ugu sarreeyey dawlad kusheega waxay ukala ordi jireen Maamulka Tigreega oo dacwada u kala qaadi jirey oo midna la’abaal marin jirey midna lakarbaashi jirey. Iskadhaaf waxkalee xitaa Maxamed Dheere oo la ogyahay inuu 100 % daacad u ahaa una shaqayn jirey Tigrega si hagar la’aan ah wuu ka badbaadi waayey oo karbaash, xadhig iyo handadaad joogto ah ayey kuhayeen.
Haddadan aan maqaalka qorayo waxay ku urursanaysa Goday iyo Dooloow oo xadbeenaadka dhinaca kale kaxiga si ay ugu adeegsadaan qorshahooda danbe ee ah ciidaynta cadka hilibka ah, bal ufiirso Ninkii Shariif ahaa ee sheegtay inuu madaxwayne yahay waxay usoo dajin hayaan siduu ushaqayn lahaaa, xaggna Dagaal Oogoo dhan wixii malukumawd kabadbaaday ayay ururin hayaan oy diyaargarayn hayaan say ufilayaan qorshaha ciidaynta cadka hilibka ah ee Shabaabka laga cuni waayey, waxaanaba intaa sii dheer inay ururro diin sheegta ay dhisayaan. Hadda midbaa Dariiqo inuu yahay lagu sheegay oo gobollada Dhexe laga abuuray, waxaa kuxiga mid yidhaa Akhwaan Al-muslimiin baan nahay oo asna koonfurta meel kamida kasoo baxo kadibna mid yidhaa Salafu Al-Saalix baan nahay oo meel kale budh kasoo yidhaa. Ujeedadana waa mar haddaad cuni wayday cadka ciil dartii ciidda ku camcami.
Jugjug meeshaada joog!!! : waa maxay caqabadaha hortaagan madaxweynaha cusub?.. Akhri..